Nhau - Maitiro ekuisa pvc madziro ekushongedza mapaneru
PVC madziro emadziro ndiwo sarudzo yakanaka yekushongedza kwemadziro. Iyo yese yekushongedza mhedzisiro yakakwira kwazvo-kumagumo uye mutengo unodhura. Iwe unofanirwa kudzidza rumwe ruzivo rwehunyanzvi kana uchiisa, kuitira kuti iyo yekushongedza kuvaka igone kukurumidza uye yekushongedza mhedzisiro inogona kuvimbiswa. Rega ndiunze kwauri, maitiro ekuisa pvc madziro ekushongedza bhodhi?
1. Maitiro ekuisa pvc madziro ekushongedza bhodhi
1. Kana uchishongedza, unogona kusarudza iyo yakaoma yekumisa mhando, kusanganisira kugadzirisa iyo keel pane yepasi madziro kutanga, nekubatanidza iyo yekushongedza kupisa kuputira bhodhi nekeel kuburikidza nesimbi majoini kana akakosha anchor. Iwo majoini ari pakati peaya majoini anogona kuvharwa nevekunze madziro ekuisa system ye extruded board, benzene board kana dombo mvere. Zadzisa.
2. Rudzi rwakakwana rwakanyatsokodzera mukati memadziro ekuvhara mapurojekiti. Naizvozvo, panguva yekumisikidzwa kweyekunze thermal insulation system, yakasanganiswa yekushongedza yekupisa bhodhi uye iyo yepasi madziro inongobatanidzwa chete nekubatanidza kana kukwana kwakabatana, iyo inonzi yakazara yakazara bonded mhando. Iyo nzira yemanyorero inofanira kusarudzwa zvinoenderana nezvakatemerwa dhizaini yechimiro chakatarwa. Shandisa rakasangana jongwe dhaka kana zvimwe zvinhu kuzadza iyo nzvimbo pakati pezvibatanidzwa.
3. Kubatanidzwa kwetambo yechitsigiso uye tsvimbo yechinamira kunonyanya kubva pane zvinodiwa pakuvaka. Iyo yekunze thermal insulation system yeye thermal kuputira yekushongedza bhodhi inosanganiswa nejoinhi uye anchor tsvimbo kugadzirisa iyo thermal kuputira yekushongedza bhodhi pamadziro. Iyo base inosanganisirwa neyaka zara yakasungwa uye yakaoma pendendi, uye inoshandiswa zvakanyanya muinjiniya.
2. Nhanganyaya kune zvakanakira pvc madziro
1. Kubatsira kukuru kukura kwayo kurema. Vashandi vakasununguka chaizvo panguva yekuvaka. Iyo ine yakanaka kupisa kuputira uye kupisa kuchengetedza basa. Shandisa PVC pamadziro ekushongedza bhodhi. Mupfungwa, zvakare zvine hushamwari kune zvakatipoteredza. Imba yacho nguva yechando. Zhizha rinodziya uye rinotonhorera, kubvisa kudikanwa kwemhepo inodziya uye kuchengetedza yakawanda simba, asi zvakare ine zvakanakira hunyoro-humbowo, murazvo-unodzora, asidhi uye alkali kuramba, ngura kuramba, kicheni kana imba yekugezera masiringi kana ekushongedza madziro.
2. Zvishongedzo zvePVC madziro epaneru ane yakasimba kugadzikana uye yakanaka dielectric zvivakwa. Mushure mekushandisa kwenguva refu, inogara yakasimba kupfuura zvimwe zvekushongedza zvemadziro. Haatyi kupenya uye kupenya kwezuva. Iyo ine yakanaka anti-kuchembera zvivakwa. Zviri nyore kusungira mumuromo uye ine yakanyanya kunamatira kumadziro.
3. Yakakwirira chimiro, yakakwira kukotama simba, yakasimba kukanganisa kuramba, kukwirisa kwakakwirira panguva yekuzorora, kuchengetedza zvinhu mushure mekupedzisa kushongedza, hazvisi nyore kukonzera marara uye kuchengetedza kushongedza mutengo. Iyo pvc yemadziro yekushongedza bhodhi ine yakatsetseka pamusoro, yakajeka mavara, akasiyana mapatani, akapfuma zvakanyanya ekushongedza mhedzisiro, uye akasiyana siyana ekushongedza mafomu.
4. Maitiro ekuvaka ari nyore kwazvo, zviri nyore kwazvo kutanga kumisikidza kumba, uye kuiswa kwacho kuri nyore. PVC yemadziro yekushongedza bhodhi iri nyore kuchenesa muhupenyu hwezuva nezuva. Haatyi chero muto kana vana vanoita graffiti pamadiro. Ingo pukuta zvinyoro nyoro nejira nyoro kudzorera hutsanana.
5.PVC madziro ekushongedza bhodhi ipurasitiki yekushongedza zvinhu. Iyo PVC bhodhi inogadzirwa neiyo huchi mesh chimiro. Nekuda kweayo maratidziro, mavara uye mapatani, inoyevedza kwazvo, inozivikanwawo seyekushongedza firimu, iyo inogona kushandiswa kwemukati madziro nedenga rekushongedza, uye inoshandiswa zvakanyanya mumhando dzakasiyana dzekushongedza imba.